Octoprint- သင်၏ 3D ပရင်တာအား အဝေးမှ စီမံပါ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Octoprint- သင်၏ 3D ပရင်တာအား အဝေးမှ စီမံပါ။
ဣဇာက်သည် | | ပုံနှိပ် 3D, Raspberry Pi
သင်ကြိုက်လျှင် ပုံနှိပ် 3Dသေချာပေါက် သင် ပိုသိချင်ပါတယ်။ octoprint ပရောဂျက်. ဤပေါင်းထည့်ကုန်ထုတ်ကိရိယာများ၏ အဝေးထိန်းခလုတ်အတွက် မျှမျှတတ လက်တွေ့ကျသော open source ဆော့ဖ်ဝဲ။ ဤပရိုဂရမ်အမျိုးအစားဖြင့် သင့်ပရောဂျက်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန် ရိုးရှင်းပြီး အလိုလိုသိမြင်နိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပရိုဂရမ်များအတွက် နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခု CAD ဒီဇိုင်း y အခြားလိုအပ်သောအစီအစဉ်များ ဤသုံးဖက်မြင်ပုံနှိပ်ခြင်းအမျိုးအစားအတွက်။
1 Octoprint ဆိုတာဘာလဲ။
2 Octoprint အတွက် ပလပ်အင်များ
2.1 plugin ထည့်သွင်းနည်း
OctoPrint သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး open source application တစ်ခုဖြစ်သည်။ 3D ပရင်တာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်။ ၎င်း၏ တီထွင်သူအား Gina Häußge ဟုခေါ်ပြီး သူမ၏ 3D ပရင်တာအတွက် သူမ၏ကိုယ်ပိုင် ထိန်းချုပ်ကုဒ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုပါပရောဂျက်သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပုံရပြီး စပိန်ထုတ်လုပ်သူ BQ သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးကာ ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီး OctoPrint သည် ယနေ့ခေတ်ဖြစ်သည်- ဤအသုံးဝင်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည်နှင့်အတူ ပုံနှိပ်ခြင်းအားလုံးကို အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ပါ။ရှိနေရန်မလိုအပ်ဘဲ။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် စက်အား သင်ထိန်းချုပ်လိုသည့်နေရာတိုင်းမှ ဒေသဆိုင်ရာကွန်ရက်သို့ သင်ချိတ်ဆက်ရန်သာလိုအပ်သည့် ဝဘ်အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုဖြင့် အလိုလိုသိမြင်ကာ ရိုးရှင်းပါသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် 3D ပရင်တာတစ်ခုတည်းသို့ ထိန်းချုပ်မှုများကို သင်ပေးပို့ရုံနှင့် မရပါ။ ပိုက်ကွန်ပေါ်အများအပြား ၎င်းတို့အားလုံးကို သင်စီမံနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Gcode ဖိုင်အများအပြားကို ဗဟိုမှ ပေးပို့ခြင်း။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်ကတော့ Raspberry Pi SBC မှာတောင် အရင်းအမြစ်နည်းတဲ့စက်မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူအများစု၏ အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သုံးဖို့ပဲ လိုတယ်။ OctoPi ပက်ကေ့ဂျ် ရရှိနိုင်ပါသည်။.
၎င်းသည် သင့်အတွက် မလုံလောက်ပါက၊ OctoPrint ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကင်မရာများကို အသုံးပြု၍ ပရင်တာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ပုံနှိပ်နည်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိနိုင်ပြီး အရာအားလုံး မှန်ကန်ကြောင်းကို အဝေးမှ စစ်ဆေးပါ။
Octoprint မှ နောက်ထပ် အချက်အလက်များနှင့် ဒေါင်းလုဒ်များ – တရားဝင်စီမံကိန်းစာမျက်နှာ
အခု သင် OctoPrint အကြောင်း သိပြီးရင် အဲဒါက ဘာလဲဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။ သော့ချက် features တွေ သင်၏ 3D ပရင်တာများကို ထိန်းချုပ်ရန် ဤဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုသင့်သည့် အားသာချက်များ-
3D ပရင်တာအား အဝေးမှ အပြီးအစီး ထိန်းချုပ်ပါ။
အလုပ်ကို ခြေရာခံပြီး စောင့်ကြည့်နိုင်မှု။
အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများမှ အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
လိုအပ်တာတွေ့ရင် ဘောင်တွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
မူမမှန်မှုများကြောင့် ခေတ္တရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ခြင်းတို့ကို WiFi မှတစ်ဆင့် စတင်ပုံနှိပ်ပါ။
Cura အင်ဂျင် (CuraEngine) ကို အသုံးပြု၍ ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း။
3D မော်ဒယ်ကို အလွှာများအလိုက် မှန်ကန်စွာ ဖြတ်တောက်နိုင်စေမည့် Laminator
သင်၏ ခွဲခြမ်းစိပ်စိပ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး သင်ဆန္ဒအတိုင်း စီစဉ်ပါ။
FDM အမျိုးအစား extrusion 3D ပရင်တာအများစုနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိခြင်း။ အထူးသဖြင့် FlashForge နှင့်။
Cross-platform (Linux၊ Windows၊ macOS နှင့် Raspberry Pi)။
ကြီးမားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသိုက်အဝန်းကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက အကူအညီ ရယူပါ။
plugins များ၏ကျေးဇူးကြောင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းနိုင်စွမ်းနှင့်အတူ Modular ။
Octoprint အတွက် ပလပ်အင်များ
ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ OctoPrint သည် ဤဆော့ဖ်ဝဲ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးချဲ့ရန် plugins များကိုပံ့ပိုးပေးသည့် modular software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး plugin များ သင့်မှာရှိတဲ့အရာတွေကတော့-
octolapse: သည် အပိုင်းအစများ ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပုံများကို ဖမ်းယူနိုင်စေသည့် Octoprint အတွက် ပလပ်အင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို ဗီဒီယိုများ၊ ကျူတိုရီရယ်များအတွက်၊ သင်လုပ်ဆောင်ပုံကို မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အမှန်တကယ် အထင်ကြီးလောက်သော ရလဒ်များဖြင့် ပရင့်ခေါင်းကို မည်သည့်အချိန်တွင်မျှ မြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
Firmware Updater ပါ: ၎င်း၏အမည် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း ဤအခြားပလပ်အင်သည် 3D ပရင်တာ၏ ဖိုင်းဝဲကို အလွယ်တကူ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ ယင်းအတွက်၊ Firmware ကို ကြိုတင်စုစည်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် Atmega1280၊ Atmega 1284p၊ Atmega2560 နှင့် Arduino DUE ပရိုဆက်ဆာများအတွက် ပံ့ပိုးမှုပါရှိသည်။
မျက်နှာပြင်အပြည့် ဝဘ်ကင်မရာ: OctoPrint အတွက် ဤအခြားပလပ်အင်ကို မျက်နှာပြင်အပြည့်တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပုံနှိပ်ဗီဒီယိုကို မြင်နိုင်စေရန် အသုံးပြုပါသည်။ အခြေခံဆော့ဝဲလ်မှ မလုပ်နိုင်သော အရာတစ်ခု။ ၎င်းသည် ပုံနှိပ်အချိန်၊ အပူချိန် စသည်တို့ကဲ့သို့ စခရင်ပေါ်တွင် လွှမ်းခြုံထားသော အချက်အလက်များကိုလည်း ပြသနိုင်သည်။
Webcam Streamer: ဤအခြားပလပ်အင်သည် သင့်အား 3D ပရင့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို streaming မှတစ်ဆင့် သင်အလိုရှိသောသူအား ပြသနိုင်စေပါသည်။ Twitch သို့မဟုတ် YouTube Live ကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Octoprint Anywhere: ၎င်းသည် အခြား 3D ပရင်တာ၏ အခြေအနေကို မြင်နိုင်စေရန် မည်သည့် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းမှမဆို အဝေးမှ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်မိုဘိုင်းတွင် ဝဘ်ကင်မရာ၊ အပူချိန်များ၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အခြေအနေ၊ ခေတ္တရပ်ရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ရန် ခလုတ်များ၊ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများ စသည်ဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရာဝတ္တုကို ပယ်ဖျက်ပါ။: တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်သည် ပုံနှိပ်တန်းစီတွင် အပိုင်းများစွာ ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုသည် ပြုတ်ကျပြီး ကျန်အရာများကို ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဤ OctoPrint plugin ဖြင့် သင်သည် ဤအခြေအနေကို အလွယ်တကူ ကုစားနိုင်သည်။ ကြွင်းသောအရာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ ပြဿနာရှိသော အပိုင်းကို သင်ဖယ်ရှားပစ်ရုံသာ။ တစ်နည်းဆိုရသော် အချိန်နှင့်ငွေကို သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
Discord Remote: သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာကို Discord ဝဘ်အက်ပ်သို့ ချိတ်ဆက်ရန်၊ သင့် 3D ပရင်တာသို့ ဘော့တ်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ညွှန်ကြားချက်များပေးပို့ရန်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို အဝေးမှ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ဘော့တ်သည် ညွှန်ကြားချက်များကို နားထောင်ပြီး ညွှန်ပြထားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်မည် (ပုံနှိပ်ခြင်း စတင်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ STL ဖိုင်များကို စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကင်မရာရုပ်ပုံအား ရိုက်ကူးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ပရင်တာ ချိတ်ဆက်ခြင်း စသည်ဖြင့်) လုပ်ဆောင်ပါမည်။
Themeify: သင်သည် အသွင်အပြင်ကို မကြိုက်၍ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုပါက Octoprint ဆာဗာကို အမြင်အာရုံဖြင့် ပြုပြင်နိုင်စေပါသည်။ ပြီးတော့ CSS ကို သိဖို့ မလိုပါဘူး။
Print Times Genius: Octoprint သည် အနည်းငယ်ပို၍ တိကျသောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံနှိပ်အချိန်များကို တိကျစွာမြင်နိုင်စေပါသည်။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပရင့်အချိန်ကိုပေးဆောင်ရန် အဆင့်မြင့်တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်အပြင် ပရင့်မှတ်တမ်း Gcodes ကို အသုံးပြုထားသည်။
အိပ်ရာ အဆင့် မြင်ယောင်မှု: နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤအခြား OctoPrint ပလပ်အင်သည် သင့်အား အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အတွက် အိပ်ရာ၏ 3D ကွက်ကွက်များကို သြဒိနိတ်များမှ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်။ BLTouch ကဲ့သို့သော 3D ပရင်တာတွင် ထည့်သွင်းထားသော အဆင့်ညှိအာရုံခံကိရိယာရှိပါက အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
OctoPrint တွင် အဆိုပါ plugins များကို သင်မည်ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သည်ကို သင်အံ့သြနေပါက ၎င်းတို့ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် ထည့်သွင်းခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ သင်ရုံရှိသည်။ လာမည့်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ ဆာဗာတွင် ထည့်သွင်းရန်-
OctoPrint ဝဘ်ဆာဗာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းရှိ Octoprint ဆက်တင်များကဏ္ဍ ( wrench icon) သို့သွားပါ။
ယခု Plugin Manager ကဏ္ဍကိုရှာဖွေပါ။
Get More ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ယခု Octoprint သည် သင့်အား plugin ကိုထည့်သွင်းရန် မတူညီသော နည်းလမ်း3ခုကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။
တရားဝင် plugin repository မှ install လုပ်ပါ။
URL တစ်ခုမှ ထည့်သွင်းပါ။
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ အလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့် plugin ၏ လက်ရှိဗားရှင်းကို ပေးဆောင်သည့်အရာဖြစ်သောကြောင့် တရားဝင် repo ကိုအသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သင်လိုအပ်သောအရာကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးလိမ့်မည်။ အသင့်ရှိလိမ့်မည်။ အသုံးပြုရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပုံနှိပ် 3D » Octoprint- သင်၏ 3D ပရင်တာအား အဝေးမှ စီမံပါ။
အိမ်အတွက် ဘာ 3D ပရင်တာ ဝယ်ရမလဲ
Odroid Go- သင့်ကိုယ်ပိုင် ခရီးဆောင်ဂိမ်းစက်ကို တည်ဆောက်ရန် ကိရိယာအစုံ